Herinandron’ny fifandraisana FJKM : “Ny fampahalalam-baovao no mibaiko ny fiarahamonina” | NewsMada
Herinandron’ny fifandraisana FJKM : “Ny fampahalalam-baovao no mibaiko ny fiarahamonina”
Manana ny anjara toerany ny fifandraisina sy ny fampahalalam-baovao eo amin’ny firenena, fiarahamonina, fiangonana… Mibaiko ny rehetra sy ny tsirairay izany, raha ny fijerin’ny ny eo anivon’ny fifandraisana FJKM.
“Eo amin’ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao, mazava izao fa ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao no mibaiko ny fiarahamonina. Mibaiko ahoana? Izy no mamolavola ny fisainantsika, ny fomba fiainantsika sy ny fifandraisana eo amin’ny samy isika.”
Vela-kevitry ny tonian’ny Fifandraisana teo aloha eo anivon’ny Foibe FJKM, taona 1989-93, Ramambasoa Hery, teny Analakely, omaly, io, momba ny asa fifandraisana ao anatin’ny Herinandron’ny Asa fifandrasaina sy fahampahalalam-baovao (Afifab) FJKM.
Tena manana ny foto-kevitra manjary mibahan-toerana tsikelikely ao an-tsain’ny tsirairay avy ny fifandrasaina sy fampahalalam-baovao. Na amin’ny maha olom-pirenena izany, na amin’ny maha kristianina, na amin’ny maha Fiangonana misy ny tsirairay. Tena mibahana tanteraka ao anatin’ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao koa ny tsy fahamarinana.
Mahazo vahana ny fifampiandaniana amin’ny fampahalalam-baovao
“Na ny vaovao mifamoivoy eto aza, misy tsy marina na tsy voamarim-pototra: azo ambara hoe ny ankamaroan’ny vaovao”, hoy izy. Nefa izany no ilonantsika sy iainantsika ao anatin’ny fiarahamonina. Manome lanja lehibe ny fifampiandaniana sy ny fiandaniana ny fiarahamonina: an’ny atsy, na an’ny aroa. Tena manasojaky ny olona ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao: ny atsy manaraka an’ity gazety ity, ny aroa mpihaino iry radio iry, ohatra.
Izany no ianantsika amin’izao fotoana izao: aiza ho aiza ny fifandraisana sy fampahalalam-baovao eo anivon’ny FJKM amin’ny taona manaraka izao? Niaina tanteraka ny fifampiandaniana, ohatra, ny radio Fahazavana, tamin’ny vanim-potoana namaivay nodiavin’ny firenena, ny taona 2009-2010.
“Izaho manokana, manahy mafy fa mbola tsy sitrany izany fifampiandaniana eto anatin’ny firenena sy ny fiangonana izany: mety mbola handalo fitsapana mahamay toy izany ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao eto amin’ny FJKM”, hoy ihany izy. Hanao ahoana? Faha-50 taon’ny FJKM ny 2018.
Randria / Sary : Mamiherison